Umnumzana Tian kunye neqela lakhe bajolise ikakhulu ekunikezeleni ngeenkonzo zomthetho ezinxulumene namazwe angaphandle kubaxumi abenza ushishino okanye ne China kwilizwe jikelele.
Iinkonzo zethu zahlulwe zaziindidi ezimbini ngokusekwe kwiintlobo zabaxumi: iinkonzo zabathengi, kunye neenkonzo zabantu, kubandakanya abathunyelwa eTshayina, ngakumbi eShanghai.
Kubathengi / kwiShishini
Njengeqela elincinci, asiqhayisi ngeenkonzo ezisemthethweni ezipheleleyo, endaweni yoko, sifuna ukuqaqambisa ukugxila kunye namandla ethu apho sinokwenza ngcono kunabanye.
1. Utyalo-mali lwangaphandle ngqo eTshayina
Sinceda abatyali zimali bangaphandle ngokwenza ubukho babo kwishishini lokuqala e-China ngokumisela ishishini labo e-China, kubandakanya i-ofisi yabameli, isebe leshishini, amashishini amanyeneyo angaphandle (i-equity JV okanye ikhontrakthi ye-JV), i-WFOE (amashishini aphesheya ngokupheleleyo), ubuhlakani , fund.
Ukongeza, senza iM & A, sinceda abatyali mali bangaphandle ekufumaneni iinkampani zasekhaya, amashishini, kunye nezinto zokusebenza.
2. Umthetho wokuThengisa izindlu
Le yenye yeendawo zethu zokuziqhelanisa apho siphuhlise kwaye saqokelela amava atyebileyo kunye nobuchule. Sinceda abathengi nge:
(1) ukuthatha inxaxheba kwinkqubo yokubhida esidlangalaleni yokuthengisa ilungelo lokusetyenziswa komhlaba ekufumaneni umhlaba onqwenelekayo wophuhliso lwepropathi okanye iinjongo zeshishini ezinje ngeefektri zokwakha, iindawo zokugcina impahla njl.
(2) ukuhambahamba ngemithetho enzima kunye nemithetho enxulumene nophuhliso lwepropathi yokuthengiswa kwezindlu, indawo yokuhlala okanye iipropathi zorhwebo, ngakumbi imithetho yocando kunye neyokwakha ezidolophini;
(3) ukufumana nokuthenga iipropati esele zikho, izakhiwo ezinje ngendawo yokusebenzela, iofisi kunye neepropathi zorhwebo, kubandakanya nokwenza uphando ngenyameko malunga neepropati ezichaphazelekayo, ulwakhiwo lwesivumelwano, irhafu kunye nolawulo lwepropathi;
(4) ukuxhasa ngemali iprojekthi yokuthenga izindlu nomhlaba, imali mboleko yebhanki, inkxaso mali;
(5) Utyalomali lokuthengiswa kwezindlu nomhlaba kwiipropathi zaseTshayina, ukufuna amathuba egameni labatyali mali bangaphandle ekuhlaziyeni, ekuphakamiseni kwakhona nasekuthengiseni kwakhona iipropathi ezifanayo.
(6) ukuthengisa izindlu nomhlaba / ukuqeshisa ngepropathi, ukuqeshisa ngendawo yokuhlala, eofisini nakwinjongo zorhwebo.
Ngokubhekisele kwiinkonzo zomthetho jikelele, sihlala singena kwisivumelwano sonyaka okanye sonyaka sokugcina kunye nabaxumi apho sinikezela ngezinto ezahlukeneyo zonxibelelwano zomthetho, kubandakanya kodwa kungaphelelanga apho:
(1) utshintsho oluhlangeneyo lweshishini kubume beshishini, idilesi yeofisi, igama lenkampani, imali ebhalisiweyo, ukumiliselwa kwesebe loshishino;
(2) ukucebisa ngolawulo lweshishini, ukuyilwa kwemithetho elawula ukusebenza kwentlanganiso yabanini zabelo, intlanganiso yebhodi, abameli bezomthetho kunye nomphathi jikelele, imigaqo elawula ukusetyenziswa kwesityikityi, kunye nemigaqo malunga nenkuthazo yolawulo;
(3) ukucebisa ngemicimbi yengqesho neyabasebenzi yabathengi, ukuphonononga izivumelwano zabasebenzi kunye nemithetho yedolophu yabasebenzi kumanqanaba ahlukeneyo, ukuyilwa kwencwadi yesandla yabasebenzi, ukudendwa kwabantu abaninzi, kunye nolamlo lwabasebenzi kunye nokumangalelwa;
(4) ukucebisa, ukuyila, ukujonga kwakhona, ukuphucula zonke iintlobo zeekhontrakthi zeshishini ezisetyenziswa kwintsebenzo yeshishini lomthengi kunye nomntu wesithathu;
(5) ukucebisa ngemicimbi yerhafu ngokubhekisele kumashishini abaxumi.
(6) ukubonelela ngengcebiso yezomthetho kwizicwangciso zophuhliso lwabathengi kwilizwe lase China;
(7) ukubonelela ngengcebiso yezomthetho kwimiba yamalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda, kubandakanya ukufaka isicelo, ukugqithisa kunye nelayisensi yelungelo elilodwa lomenzi, uphawu lwentengiso, ilungelo lokushicilela kunye nokunye;
(8) ukufuna izinto ezifunyanwayo ezilindeleke ngokuthumela iileta zamagqwetha egameni labathengi;
(9) ukuyila, ukuphonononga izivumelwano zokuqesha okanye iikontraki zentengiso yeepropathi eziqeshiswe okanye ezabanini bazo ziiofisi zabo okanye iziseko zokuvelisa;
(10) ukujongana nabathengi bamakhasimende angenabubele, kunye nokubonisana ngokusemthethweni;
(11) ukulungelelanisa nokulamla ungquzulwano phakathi kwabaxhamli noorhulumente;
(12) ukubonelela ngolwazi olumiselweyo malunga nemithetho yePRC kunye nemigaqo emalunga nokusebenza kweshishini; kunye nokunceda abasebenzi bayo babe nokuqonda okungcono ngokufanayo;
(13) ukuthatha inxaxheba kuthethathethwano phakathi kwabaxumi kunye nawuphina umntu wesithathu malunga nemicimbi yokudityaniswa, ukufumana, ukudibana, ulungelelwaniso, umanyano lweshishini, ukuhanjiswa kweempahla kunye namatyala, ukuhlawula amatyala nokupheliswa;
(14) ukwenza uphando ngononophelo kumaqabane oshishino ngokufumanisa iirekhodi zorhwebo zamaqabane anjalo agcinwe nomzi mveliso wasekhaya kunye neofisi yorhwebo;
(15) ukubonelela ngenkonzo yezomthetho kunye / okanye ukuthatha inxaxheba kuthethathethwano malunga neembambano neembambano;
(16) ukubonelela ngeenkonzo zoqeqesho lwezomthetho kunye nezifundo ngemithetho yePRC kubaphathi babasebenzi nakubasebenzi.
4. Ulamlo kunye noMangalelwano
Sinceda abathengi bamanye amazwe ekwenzeni ulamlo kunye nokumangalelwa e-China ekuqhubekeni, ekukhuseleni nasekukhuseleni umdla wabo e-China. Simele abathengi bamanye amazwe phantse kuzo zonke iintlobo zeembambano eziphantsi kolawulo lwenkundla yaseTshayina, ezinje ngeembambano zamashishini adibeneyo, uphawu lwentengiso, intengiso yamazwe aphesheya kunye nekhontrakthi yokuthenga, ikhontrakthi yokubonelela, izivumelwano zelayisensi ye-IPR, urhwebo lwamanye amazwe kunye nezinye iimbambano zorhwebo namaqela amaTshayina.
Abantu ngabanye / abaThengi / abaPhesheya
Kule ndawo yokuziqhelanisa, sinikezela ngeendlela ezahlukeneyo zomthetho woluntu ezifuneka rhoqo ngabaxumi ngabanye.
1. Umthetho wosapho
Ndincede inani labaphambukeli okanye abaphuma eTshayina ngeengxaki zabo ezivela phakathi kwezibini, amalungu osapho. Umzekelo:
(1) ukuyila izivumelwano zabo zangaphambi komtshato kunye nabatshati babo kunye nabayeni babo bahlala bengamadoda okanye abafazi baseTshayina, kunye nokwenza ezinye izicwangciso zosapho kubomi bomtshato bexesha elizayo;
(2) ukucebisa abathengi ngoqhawulo-mtshato lwabo e-China ngokwenza izicwangciso zabo zoqhawulo-mtshato ekukhuseleni iimfuno zabo kwimeko yezikhundla ezininzi ezichaphazelekayo kwinkqubo ezihlala zintsokotha inkqubo yoqhawulo-mtshato; ukucebisa ngokwahlulwa, ukwahlulwa kweepropati zomtshato, iipropathi zoluntu;
(3) ukucebisa ngogcino lwabantwana, ukugcinwa nokugcinwa;
(4) Iinkonzo zocwangciso lwezindlu ngokubhekisele kwiiasethi zempahla okanye iipropathi eTshayina ngaphambi kokuba ziyekwe.
2. Umthetho welifa
Siyabanceda abathengi ekuzuzeni ilifa, ngentando okanye ngokwasemthethweni, imihlaba ishiyelwe okanye ishiywe ngabo ziintanda, izihlobo okanye abahlobo babo. Ezo ndawo zinokuba ziipropathi zokwenyani, iidipozithi zebhanki, iimoto, inzala yezabelo, izabelo, iimali kunye nolunye uhlobo lweeasethi okanye imali.
Ukuba kukho imfuneko, siyabanceda abathengi ekwenzeni ilifa labo ngokubhenela kwinkqubo yenkundla enokuthi ingabi nobutshaba kwaphela xa amaqela evumelekile kwimidla yabo kumhlaba.
3. UMthetho wokuThengiswa kweZakhiwo
Sinceda abantu bamanye amazwe okanye abathumela ukuthenga okanye ukuthengisa iipropathi zase China, esp iipropathi ezibekwe eShanghai apho sizinze khona. Sicebisa abo bathengi kwintengiso okanye kwinkqubo yokuthenga ngokubanceda ekwenzeni imigaqo kunye neemeko zentengiselwano kunye nokubona ukusebenza kweekhontrakthi zentengiselwano.
Ngokunxulumene nokuthenga ikhaya e-China, sinceda abathengi ukuba baqonde izithintelo zokuthenga ezibekwe ngaphandle, ukujongana namaqela ahambelana noku kubandakanya abarhwebi, abathengisi kunye neebhanki kwaye bajongane nemicimbi yotshintshiselwano lwangaphandle ebandakanyekayo kwinkqubo.
Ngokumalunga nokuthengisa ipropathi eShanghai, China, asincedisi abathengi bethu kuphela ukuba bathathe izivumelwano kunye nabathengi kodwa sikwabanceda ukuba baguqule imali yabo yokuthengisa ibe kukutshintshiselana kwamanye amazwe njengeedola zaseMelika kunye nokucofa okufanayo eTshayina baye kwilizwe labo.
4. Ingqesho / Umthetho Wezabasebenzi
Apha sisoloko sinceda ukuthengisa abasebenza eShanghai ukujongana nabaqeshi babo esp kwimeko yeembambano ezinje ngokugxothwa ngokungafanelekanga kunye nentlawulo engaphantsi njl.
Ngenxa yesimo sengqondo sokukhetha umThetho weKhontrakthi yabasebenzi e-China kunye neminye imithetho engekho ngqiqweni, kwiziphumo ezininzi ezifumana umvuzo ophezulu e-China, nje ukuba kubekho impikiswano nabaqeshi, abasebenzi bahlala bekho kwimeko ehlazisayo apho kuya kufuneka baqubude phambi kwabaqeshi babo ukuba azikhuselekanga kakhulu phantsi kwemithetho yabasebenzi baseTshayina konke konke. Ke ngoko, kuthathelwa ingqalelo umngcipheko onje onxulumene nokuqeshwa kwe-expat e-China, sikhuthaza abathumeli abasebenza e-China ukuba beze kwimvumelwano esemthethweni neenkampani zabo ukunqanda ukubekeka kwimeko enzima e-China.
5. Umthetho Wokwenzakala Komntu
Siye sawasingatha amatyala amaninzi okonzakala kwabantu abandakanya abantu bamanye amazwe abonzakeleyo kwiingozi zendlela okanye kwimilo. Sifuna ukulumkisa abantu bamanye amazwe e-China ukuba bakulumkele ukwenzakala e-China kuba phantsi kwemithetho yokulimala yase-China, abasemzini bayakufumana imbuyekezo eyanikezelwa ziinkundla zase China kubo ingamkelekanga kwaphela. Nangona kunjalo, le yinto eya kuthatha ixesha elide ukuyitshintsha.
Ummeli osemthethweni weNkampani yase China, I-China yoQhawulo-mtshato eQinisekileyo, I-China Eqinile Kumthetho Wosapho,